ओलीले भाषण ठोके तर, अझै बनेन झोलुङ्गे पुल, व्याँसीलाई महाकाली तर्न ताङ्लोकै भर - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
ओलीले भाषण ठोके तर, अझै बनेन झोलुङ्गे पुल, व्याँसीलाई महाकाली तर्न ताङ्लोकै भर
दार्चुला व्याँसीलाई महाकाली तर्न ताङ्लोकै भर । सरकारको घोषणा अनुसार २०७४ साल असोज भित्रै तुइन विस्थापन हुनुपर्ने थियो तर, त्यो भाषणमा मात्रै सिमित थियो ।
सायद धेरैले विर्सिसके । केही वर्षअघिदेखि चर्चामा थियो तुइन मुक्त देश । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा निर्वातमान प्रधानमन्त्ती केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशभरका तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
ओलीको चर्चित भाषणले केही तुइन त विस्थापन गरे तर, अझै खास ठाउँहरुमा उनको ध्यान पुगेन । उनी प्रधानमन्त्री बनेर पनि विदा भइसके मुलुक तुइन मुक्त छैन । दार्चुलाका व्याँसवासी अहिले पनि उर्लंदो महाकाली तुइनमै गर्छन् ।
उनीहरु ज्यान जोखिममै राखेर वारपार गर्न तुइनमा ताङ्लोकै भर पर्नुपरेको छ ।
वर्षौदेखि स्थानीयवासीले महाकाली नदीमा झोलुङ्गे पुल बनाउन अनुरोध पनि गरे । कोही कसैबाट माग पूरा नहुँदा व्याँसीवासीले नदी वारपार गर्न तुइनकै भर पर्नुपरेको छ ।
दार्चुलाको महाकाली नदीमाथि लगाइएका आधा दर्जन तुइन अहिले पनि सञ्चालनमा छन् । बर्खाको उर्लंदो महाकालीमा स्थानीयवासीले ज्यानकै बाजी थापेर आवतजावत गर्नुपरेको छ ।
तुइनको मात्रै भर, पुल नबन्दा सकसः
दार्चुलाका बासिन्दालाई किनमेल तथा गाउँमा उत्पादित कृषि उपज बिक्रीवितरण मात्रै होइन, औषधि उपचारका लागि अस्पताल जानसमेत तुइनको मात्रै भर छ ।
पुल नबन्दा सबैभन्दा बढी सकस स्कुले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई परेको छ । बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकले तुइन तान्न नसक्ने हुँदा उनीहरूलाई तार्न सहयोगी आउनैपर्ने बाध्यता छ ।
“तुइनको डोरीलाई तान्ने बल सबैलाई नपुगेर र आत्तिँदा धेरै जना लड्ने गरेका छन्”, व्याँस गाउँपालिका–२ का मुकेश बुढाथोकीले भने, “तुइन बन्छ भनेर सुनेको वर्षौं भएको छ यहाँका नागरिकले । तर, पुल बन्ने सपना जस्तै लाग्न थालेको छ, दार्चुलाका व्याँसवासीलाई । ”
उनका अनुसार डोरी चुँडियो भने सामान डुब्यो मान्छेको ज्यान पनि गयो । कैयौँ महाकालीमा बेपत्ता पनि भएका छन् । फलामे तार खोलावारिपारि लगाइएको हुन्छ । फलामे तारमाथि रसी अर्थात् स्थानीय भाषामा ताङ्लोको प्रयोग गरिएको हुन्छ । कैयौँले यही तुइनमा अड्क्याएको ताङ्लो चुँडिएर ज्यान गुमाउँछन् ।
नेताका भाषण परिवर्तन भएका छैनन्
“पटकपटक नेताका आश्वासन आए, पञ्चायती बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा देश पुग्यो, नेताका भाषण परिवर्तन भएका छैनन्, पुल बनाउँछौँ भनेकै छन् तर पुल कहिले बन्ने हो थाहा छैन”, स्थानीयवासी कल्यानसिंह धामीले भन्नुभयो । उनले घरमा चाहिने नून, चामल, साबुन तेलदेखि घर निर्माणमा प्रयोग गरिने जस्तापाता सरिया सिमेन्ट यही तुइनको सहारामा ल्याउनुपरेको बताए । “मैले यही तुइनमार्फत मान्छे र समान ओसारपसार गरेको पनि वर्षौं भइसक्यो”, उनले भने ।
उनले बर्खाको समयमा नदीवारपार गर्न निकै डर छ । ज्यानकै बाजी राखेर वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तुइन नभए खानलाई अन्न हुँदैन । चामल त्यही भारत गएर ल्याउने हो भने ।
दुम्लिङका बुढाथोकीले भने, “नेपालतिरबाट खच्चड आउने बाटोसमेत भत्किसक्यो । व्यासको सुनसेराको तुसरपानीमा पहिराले बाटो अवरुद्ध भएको छ । गाउँमा चामल पाउँदैन ।
तुइन लगाएर पारिपट्टिबाट ल्याउन पनि निकै समस्या छ ।” उनका अनुसार भारतीय एसएसबीले देख्नेबित्तिकै समातिहाल्छन् । उनीहरुको आँखा छलेरै ओसारपसार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिले बर्खाको समयमा त निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
महाकाली नदीमाथि तुइन र ट्युब विस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग अन्तर्गतको सस्पेन्शन ब्रिज डिभिजनले दार्चुलाका चार ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिरहेको छ ।
मालिकार्जुन गाउँपालिकाको बाकु, व्याँस गाउँपालिकाको बडुगाउँ, बर्तिघाट र मालघाटमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको हो ।
कहिले बन्छ झोलुङ्गे पुल
ब्याँस गाउँपालिकाका मुख्य तुइन रहेका ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण भइरहेको ढिलाइले स्थानीयवासीले हिउँद र बर्खायाम दुवै समय महाकाली नदीमाथि जोखिम मोलेर हिँड्नु परेको व्यास–२ का रवीन्द्रसिंह धामीले बताए ।
मुख्य नाकामा झोलुङ्गे पुलका लागि फाउन्डेशन खनियो तर त्योभन्दा अघि काम बढेको देखिएन । “नेपालकै बाटो भएर जान पनि गाउँसम्म सडक पुगेको छैन”, उनले भने, “निषेधाज्ञा होस् जे भए पनि त्यही भारतीय बाटो भएर हिँड्नुपर्छ ।
नेपालतिर हिँडेरै जान एक दिनमा मुस्किलले गाउँ पुगिन्छ ।” नदी तरेर जाने हो भने एक घण्टामै सदरमुकाम खलङ्गा पुगिने भएपछि सबैको सहारा त्यही तुइन बनेको उनको भनाइ छ ।
अहिले बाकू र बडुगाउँमा पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ, सस्पेन्शन ब्रिज डिभिजनका इन्जिनीयर अजय यादवले भने, “निषेधाज्ञाका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको छ । समयमै समान पाउन नसक्दा निर्माण केही ढिला भएको हो ।”
माल र बर्तिघाटमा भने पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको छ । निर्माणमा चाहिने लट्ठा, ग्रिपलगायत सामग्री सस्पेन्शन ब्रिजले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायी धनबहादुर कुँवरले ब्रिज डिभिजनले नै निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन नसक्दा निर्माण कार्य रोकिएको बताए ।
उनले भने, “हामीले ०७६ मङ्सिर ६ र पछिल्लो समय ०७८ वैशाख १५ गते समान उपलब्ध गराउन आयोजना प्रमुखलाई निवेदन दिएका छौँ । तर अहिलेसम्म सामान नै नदिँदा तीनचार महिनामा सकिने काम अघि बढेको छैन ।”
व्यवसायी कुँवरका अनुसार नेपाल भारत दुवैतर्फ पुल निर्माणका लागि चाहिने सामग्री जम्मा गरेको हराउन थालिसकेको छ । फाउन्डेशन पनि पुरिनथालेको छ ।
तर अझै समान नआउँदा काम गर्न समस्या भएको छ । बाकु र बडुगाउँमा भने असोजभित्रै निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको निर्माण व्यवसायी दीपक साउँदको भनाइ छ ।
कोरोनाका कारण समयमै सामान नआउँदा केही काम रोकिएको उनले बताए । “धेरैजसो काम सकिएर आवतजावत गर्न मिल्ने भएको छ”, उनले भने, “पूरै पुल हस्तान्तरण गर्ने गरी असोजभित्र सकिन्छ ।”
# ताङ्लोकै भर
के तपाईलाई खिर मनपर्छ ? खिर खानुका फाइदाहरु
‘बलेवामा हवाईजहाज सरर...’
कहिले बन्छ समृद्ध कर्णाली ? दलीय द्वन्द्वमा दबिएको कर्णाली प्रदेशसभा
जलवायु परिवर्तनका कारण लेक चढ्न थाले चराहरुः लोभीपापी गुरुड जुम्लाको सिमानामा